Chelsea gooldarro dusha u saartay Arsenal oo ay booqatay, Gunners oo ku jirta kaalimaha ugu hooseya horyaalka & Lukaku oo shabaqa soo taabtay… + SAWIRRO – Gool FM
Chelsea gooldarro dusha u saartay Arsenal oo ay booqatay, Gunners oo ku jirta kaalimaha ugu hooseya horyaalka & Lukaku oo shabaqa soo taabtay… + SAWIRRO
Dajiye August 22, 2021
(London) 22 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea gooldarro dusha u saartay naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates, Gunners ayaana haatan ku jirta kaalimaha ugu hooseya horyaalka ku jirta.
Blues ayaa ku badisay 2-0, iyadoo Lukaku uu shabaqa soo taabtay, isla markaana dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee Chelsea.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Chelsea.
Daqiiqadii 15-aad kooxda Chelsea ayaa durba la wareegtay hoggaanka ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay xiddigooda cusub ee Romelu Lukaku, oo caawin ka helay saaxiibkiis Reece James.
35-daqiiqo isla qeybtii hore marka ay ciyaarta mareysay Chelsea ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta, waxaana 2-0 ka dhigay caawiyihii goolkii koowaad ee ciyaarta, Reece James, kaddib markii uu dhammaystiray kubbad uu ka helay saaxiibkiis Mason Mount.
Qeybta labaad ee dheesha marka dib leysugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan, iyagoo Blues ay gacan sarreysay, isla markaana ay sameysay fursado badan ee goolal loo filan karay.
Lukaku ayaa ku dhawaaqday inuu goolkiisa labaad ee kulankan iyo goolka saddexaad ee ciyaarta dhaliyo, laakiin uma suurogelin Leno ayaana ka badaadiyey kubbad madax ahayd oo xitaa birta ku sii dhacday, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-0 oo ay ku adkaatay Blues.
Chelsea ayaa haatan hoggaanka u haysa horyaalka Premier League, waxaana ay hoggaanka ku haystaa xaraf ahaan maadaama Magaceedu uu ka bilowdo (C), isla markaana ay goolasha iyo dhibcahaba ay kala siman yihiin Liverpool oo ay wadaagaan Lix dhibcood, maadaama ay guuleysteen labadoodii kulan ee ugu horreeyey.
Dhinaca kale Arsenal ayaa caawa ku hoyanaysa iyadoo ku jirta kaalinta 19-aad ee looga laabto horyaalka Premier League, waxaana ka hooseysa kaliya hal koox waana Norwich City.
Southampton oo taako u dhigtay kooxda Manchester United oo ku soo booqatay garoonka St. Mary's… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Levante iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay